Home Wararka Hay’adda NISA oo ka digtay shirqool lagu dilayo Farmaajo iyo Rooble
Hay’adda NISA oo ka digtay shirqool lagu dilayo Farmaajo iyo Rooble
Hay’adda Nabad-Sugidda iyo Sirdoonka Soomaaliya ee NISA ayaa digniin ka bixisay shirqool sida ay sheegtay Al-shabaab la beegsan rabaan Madaxweyne Farmaajo iyo Ra’iisul wasaare Rooble.
Qoraal lagu daabacay bogga Twitter-ka NISA ayaa lagu sheegay in Hay’addu la wadaagtay Madaxda Qaranka warbixin ku saabsan shirqool lagu beegsanayo Madaxweynaha iyo Ra’iisul wasaaraha dalka.
Hay’adda NISA ayaa tilmaantay in Fulinta Shirqoolkaas loo xil-saaray Maxamed Maahir oo ka tirsan Saraakiisha Sare ee Al-Shabaab. Hay’adda ayaa sidoo kale caddaysay in ay daba-gal ku hayso cid kasta oo ku lugleh shirqoolka Al-shabaab u maleegayaan Madaxweynaha iyo Ra’iisul wasaaraha dalka.
Previous articleLaftagareen oo ku dhacay god siyaasadeed kaddib markii uu sheegay…
Next articleFadeexad ka dhalatay musuq-maasuq uu ku kacay Wasiir Cabdi Sheekh Axmed
Somalia: NISA oo lumisay kalsoonida saaxiibada beesha caalamka
UNITED NATIONS ASSISTANCE MISSION IN SOMALIA (UNSOM) launches Job for: FIELD...